hololodilolo | HoLOLo....DiLoLO
Author Archives: hololodilolo
တက်ပြီးရင် ပြန်ကျလေ့မရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေလိုပဲ..
ထုနဲ့ထည်နဲ့ ထွားကြိုင်းလာနေတဲ့ အတ္တတွေ၊
ထားရာနေ စေရာသွား.. ပစ်ချခဲ့တဲ့နေရာ ကျန်မနေရစ်တတ်တော့ဘဲ
ရှားရှားပါးပါး…… ကျနေဆဲနဲ့ ကျရိပ်ကျခြေ ဆက်ရှိနေတာတခုကတော့
March 6, 2017 by hololodilolo	poem, thoughts	Leaveacomment
ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေမှာလည်း ပန်းရနံ့တွေ သင်းသင်းမွှေးလို့လေ။
မနက်နိုးချိန်ကစလို့ မျက်လုံးတွေက ပြုံးနိုင်ပြီး
နှုတ်ခမ်းတွေက ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ထိ အားရပါးရ ရယ်နိုင်ကြတယ်။
ကိုယ်တွေ ဝေးသွားကြရင် အခြေအနေတွေသာယာလာမယ့်အကြောင်း
အညံ့အသက်တွေ အနားမှ မသီနိုင်အောင်
မတော်တဆ အိမ်မက်ထဲ ဖြတ်လျှောက်မိရင်တောင်
February 16, 2017 by hololodilolo	thoughts	Leaveacomment
တွေဝေမေ့လျော့ခြင်း အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့
ခေါင်းကို ဒေါက်ခနဲခေါက် ပြောတတ်သူ။
ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်.. ဟေ့ရောင်.. မင်းမှာတရားမှ မရှိတာကိုးကွ…
အရောင်မပါဘဲ ရယ်လို့ရတာတွေ ရှားပါးလာကြောင်း ကိုယ်ပြောတိုင်း
သူ့မျက်နှာ ခဏ.. ခဏ.. တည်.. တည်သွားတတ်တော့..
စိတ်တိုင်းကျ ရယ်မောနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ရွေးချယ်သွားလေရော့သလား။
ပတ်ပတ်လည် ကြည့်ရင်း ရယ်မောနေတတ်ကြောင်းနဲ့
တောက်လျှောက်ပြုံးနေတော့တယ်… လို့ ပြောပြကြတော့
နဖူးက ဆံပင်လေးသာ သပ်တင်ပေးခဲ့တယ်။
November 23, 2016 by hololodilolo	poem, thoughts	Leaveacomment
ဖြူတူတူဦးနှောက်တွေက သူမှတ်မထားဘူးလို့ပဲ.. တတွင်တွင်…
ပထမဆုံးအနမ်းလို့ ကြားတိုင်း မျက်ခုံးဆီကို.. သွားသွားစမ်းမိတာ အကျင့်ကိုစွဲလို့…
ဒီဇင်ဘာည 🎼 သီချင်းသံမကြားမချင်း မထဘူး.. ဆိုလည်း ခေါင်းအုံးတခြမ်း အအေးပတ်ရုံထက်တော့ ပိုမလာတော့ဘူးလေ…
မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တိုင်း မြင်နေကျ….. ပါးချိုင့်လေးနဲ့တော့ တဘဝစာ….ေ..ဝဝဝ…းးးး….
October 17, 2016 by hololodilolo	poem, Uncategorized	Leaveacomment
ခပ်လေးလေးအရာတွေကိုပဲ သယ်ထားချင်ခဲ့တဲ့ အရူးတစ်ယောက်ရှိဖူးတယ်
အရူးဆိုတော့ အကန့်အသတ်ရယ်လို့ မသိရှာဘူး။
ဘာတွေပစ်ချခဲ့လို့ ဘာတွေသယ်သွားမှန်း အရူးလည်း ချက်ကျလက်ကျတော့မသိပြန်ဘူးတဲ့။
ရယ်ပြရမယ်လို့ အချက်ပေးရင် သွားလေးဖြဲလို့
ငိုမှလို့ အသိဝင်ရင် မျက်ရည်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်လောက်နဲ့
ပျော်ပျော်ကြီးရှေ့ကို သွားလေရဲ့။ (အရူးကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပျော်ပျော်ကြီးလို့ သတ်မှတ်တယ်။)
တခုခုတော့ ပျောက်နေတာ အရူးသိသလိုလို..ဆိုပဲ
အရူးမသိတာက အရူးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရာဝတ္ထုကြီးတခု ဖြစ်လာတာပဲ
အသက်သာ ရှူနေပြီး သူတယောက်စာပဲ အသုံးဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုကြီးပေါ့။
ဖုန်တွေ ပင့်ကူအိမ်တွေကြား ငုတ်တုတ်ကလေးရယ်မှ ထိုင်လို့။ ။
September 19, 2016 by hololodilolo	poem	Leaveacomment
တွေးတောမနေတော့ပါဘူး .. ချစ်ရယ်..
ကိုယ့်ဥာဏ်ရည်ကိုက ကူးလွယ်ခတ်လွယ် ခပ်တိမ်တိမ်ရယ်။
ရေစရာ ကြယ်ရယ်လို့ကို ရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။
ကိုယ်ကတော့ သဲတရှပ်ရှပ်နဲ့လည်း ကျေနပ်လိုက်တာပဲ
ရာသီဥတုက မသိမသာလေးအေးလာပြီ.. ချစ်ရဲ့..
အပေါ်ရော အောက်ရော.. ဘာကာရန်.. ဘာချိတ်ဆက်မှုမှ ရှာမတွေ့နိုင်ဘူး..
ဒါက အရူးချီးပန်း ခပ်နှမ်းနှမ်းတွေရယ်လေ။
သူ.. အသားအရေတွေ မွဲခြောက်လာတယ်..
သူ ပစ်စလက်ခတ်နေတယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. ဝုန်းခနဲ ပိန်ကျသွားတယ်..
သူ အလည်လွန် အပျော်အပါးလွန်နေတယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. တော်ကြာ ဝဖောင်းဖောင်း ပွယောင်းယောင်းဖြစ်လာတယ်..
သူ မတရားစားသောက်နေပြန်တယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. မျက်လုံးတွေ ဝေဝေလာတယ်..
သူ မအိပ်မနေ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြန်တယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. ကြည့်လိုက်တိုင်း တဟားဟားနဲ့..
သူ ဟေးလားဝါးလားကြိုက်သေးတယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. ချက်ချင်း ငြိမ်ငြိမ်ကျသွားတယ်..
သူ အိုဗာတွေ သိပ်လုပ်တာပဲလို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. ခုပဲကြည်လင်လိုက်.. ခုပဲမှုန်မှိုင်းလိုက်..
သူ အပြောင်းအလဲ သိပ်မြန်တာပဲလို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. တနေ့လုံး အိပ်အိပ်နေနိုင်တယ်..
သူ အပျင်းထူ ဇိမ်ယူပြန်တယ်လို့ ကျွန်မက ထင်တုန်း။
သူ.. ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူး..
သူ ပုန်းနေတယ်လို့ ကျွန်မက ထင်နေတုန်းပါ။
October 18, 2015 by hololodilolo	poem	1 Comment
အပြုအမူတစ်ခုကို သုံးပတ်လောက် ဆက်တိုက်လုပ်ရင် အဲဒါဟာ အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာသတဲ့။ ဆိုရင်.. စောစောထစရာမလိုတဲ့ ပိတ်ရက်မျိုးမှာလည်း လူကအလိုလို နိုးလာတာ အထူးအထွေတော့လည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ၂နာရီလောက် အချိန်တွေပိုနေသေးသည်ပဲ။ လူပျင်းအလုပ်လို့ပဲဆိုဆို မထသေးဘဲ တွေးချင်ရာတွေး အိပ်ပျော်သွားလိုက် ပြန်နိုးသလိုလိုဖြစ်လိုက် နိုးတဝက်နဲ့ မထသေးဘဲ ဆက်နှပ်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဇိမ်ယူခြင်းကို လုပ်ဖို့ပဲ အိပ်ချင်မူးတူး အာရုံရောက်တယ်။
sound cloudကို လှမ်းဖွင့်ထားလိုက်တယ်။
「ကိုယ်တယောက်တည်း စောင့်နေမယ် ဒီအိမ်လေးထဲမှာကွယ်…」
အိမ်စောင့်သူ။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်အမြဲတမ်း စိတ်ပူတယ်လေ။
「လက်ထပ်ဝတ်စုံ ကိုယ်ပေါ်မှာ သိပ်လှတဲ့ အချစ်ကလေး.. 」
၂၅မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်က တခုခုကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာမို့လား။
ဟော.. ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်တဲ့ မြရဲ့လ။ အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖူးပြီးသား ဆရာမဂျူးရဲ့ မြရဲ့လ။ စာဖတ်ခြင်းကိုလည်း သဘောကျသလို ဒီလိုမျိုး အသံနဲ့ ဖတ်ပြတာကိုလည်း နှစ်ခြိုက်သည်လေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကျွန်မသဘောကျတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အသံဖမ်းထားဖို့ ခဏခဏ ကြိုးစားဖူးသည်ပဲ။ သူ့လို အသံချိုချိုလေးနှင့် စိတ်ဝင်စားအောင် အာရုံထဲပါ မြင်လာအောင် မဖတ်တတ်ပေ။
「မြို့ပြ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးသံသရာမှာ စိတ်ပါလက်ပါ လှည့်ပတ်နေထိုင်ရင်း ကျွန်တော်နှင့် သဘာဝတရားသည် ဝေး၍ဝေး၍ လာခဲ့သည်။ 」
တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ ပိုပိုနီးလာလေလေ သဘာဝတရားတွေနဲ့ ပိုပိုဝေးသွားလေလေဖြစ်လာတာပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေမြင်နိုင်တဲ့ ခရီးသွားနေရင်းတောင် အပြင်ဘက်ထက် ကိုယ့်လက်ထဲက စကရင်သေးသေးလေးဆီသာ အာရုံရောက်နေတတ်သည်။ အပြင်က အသံတွေနားထောင်နေဖို့ထက် အိမ်ကစထွက်ကတည်းက နားထဲနားကြပ်ကိုထည့်ပြီး အသံခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲ ဖွင့်ထားဖြစ်တော့သည်ပဲ။ မြို့ပြထဲ ကျွန်မ စိတ်ပါလက်ပါ စီးမျောခဲ့သည်။ စီးမျောနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေတောင် ပြောင်းပြောင်းလာခဲ့သည်အထိ။ စိတ်ပါလက်ပါ စီးမျောဖြစ်ဦးမှာလည်း သေချာသည်။
「ကျွန်တော့်ဇနီးသည် အရာရာတွင် ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသော အမြင်ရှိသူဖြစ်၏။ သူမကို သက်သက်ညှာညှာပြောရလျှင် ဂန္တ၀င်အမြင်ရှိသူဟု ခေါ်နိုင်မည် ထင်ပါသည်။ ဘယ်လောက်များ ဂန္တ၀င်ဆန်လိုက်သလဲ ဆိုလျှင် နာမည်ကိုက…. 」
အိုး.. ဘယ်တုန်းက ခြံစည်းရိုးက ပန်းတွေက ခရမ်းနဲ့ အနီချည်းပဲ ကျန်တော့တာလဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ရာသီချိန်ကုန်တော့ အဖြူပင်အကုန် ကျွန်မပစ်လိုက်ပြီလား။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ပန်းတွေလှနေရင် ပြီးတာပါပဲလေ။ ကျောင်းကားကလည်း လမ်းမှာ စက်ပျက်နေသေး။ အမေရေ.. ဘာချက်ထားတုန်း။ အကျင့်ပါနေတဲ့လက်က ကြောင်အိမ်ကို ဖွင့်ပြီးသား။
အော်.. ဒီအခန်းလေးထဲ သစ်သားကြောင်အိမ်လေးမှ မရှိဘဲ။ ရေခဲသေတ္တာထဲပဲ အကုန်ရှိနေမှာပါ။
စောင်ခြုံထားမှပဲ။ မိုးမရွာတော့ပေမယ့် အအေးဓါတ်ကရှိနေတုန်း။
「မြအပေါ် ကျွန်တော်စိတ်ပျက်ရခြင်းမှာ မြသည် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းမှာ နေထိုင်ရသည့် ဘဝနှင့် ဘယ်လိုမှ နေသားကျမလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။」
ဇာတ်လမ်းအဆုံးတွင် မြရေတွင်းထဲ ကျသွားမှာ သိနေပြီးဖြစ်လို့ မြအကြောင်းစကတည်းက ကျွန်မ မြကို သံသယနှင့် စကြည့်ပြီးသား။ ဒီနေရာမှာ မြဟာ အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားနေရမှာ။ ဒါကတော့ မြ သေချာပေါက် စိတ်ထိခိုက်ရမှာပဲ။ ဘာလို့များ မြဟာ…. ။ စသဖြင့်။
ဒီလိုဖြစ်တော့မယ် ဒီလိုလုပ်နေတယ် သိရုံလေးနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မယုံကြည်နိုင်တော့တာလည်း အသက်အရွယ်ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်လောက်တာပါပဲ။ အထူးတလည် ပြောင်းလဲယူမနေချင်တော့ပါ။
「မျက်စောင်းထိုးလျက် ရယ်မောတော့ ကျွန်တော့်ဒေါသတွေ ပြေလျော့ကျခဲ့ရတာပါပဲ။」
ဒုက္ခပါပဲ။ ဒုက္ခပါပဲ။ ဒါလည်း လုပ်ရဦးမယ်။ ဒီဖိုင်တွေလည်း မပြီးသေးဘူး။ ခဏက ဒါသွားဖတ်လိုက်တာ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ဒါမျိုးတွေ သိအောင်လုပ်ရဦးမယ်။ ဟင်.. ဒီပတ်စဝေါ့က ဘာပါလိမ့်။ ဟေး.. ဟေး. ခဏ. ခဏလေး. ငါဒါတွေ မသိဘူးဟ။
အော်.. စိတ်ထဲက ဖိစီးမှု၊ ပူပင်မှုတွေက အိပ်သွားမှ၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်သွားမှ ပေါ်ပေါ်လာတာ ပိုပင်ပန်းတယ်။ သတိရခြင်းနဲ့ နာကျင်မှုတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
「တဖက်မှာ တောင်တန်း၊ တဖက်မှာ မြစ်၊ ရာသီဥတုသည် နှစ်သက်စဖွယ်ရှိသည်။
ကျွန်မတို့ မြို့မှာ ဆောင်းဥတုဟာ ဆောင်းဥတုနဲ့ တူအောင်အေးတယ် အစ်ကို။ နွေဥတုမှာတော့ သစ်ရွက်တွေ တကယ်ကြွေကြတယ်။ တောင်လေတကယ်လာတယ်။ လေဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး လတ်ဆတ်နေတာ။ သစ်ပင်ရိပ်ကြောင့်သာ သိပ်မပူဘဲ အေးမြနေတာကိုး။
ရာသီသုံးမျိုးတွင် ထင်ရှားကွဲပြားစွာတွေ့မြင်ရသော သက်ဆိုင်ရာရှုခင်းများကို ……」
ခုတော့ဖြင့် မြရဲ့မြို့လေးနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာ ဟိုနေရာမှာ ဒီနေရာမှာ ရေကြီး၊ လေကြီး။ အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာ။ အရိုးကွဲအောင်အေး။ ကျောကော့အောင်ပူ။ ဖောက်ပြန်လာနေသော ရာသီဥတုများ။ ရှားပါးလာသော သံယံဇာတများ။ ပျက်စီးလာနေသော မြေဆီမြေနှစ်များ။ ကျွန်မတို့ ယူသုံးတာ သိပ်များသွားကြပြီ။ အယူသာရှိပြီး စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဖြည့်တင်းခြင်း ပါးရှားခဲ့ကြခြင်း ပြယုဂ်များသာ။
သတင်းထကြည့်ရင်ကောင်းမလား။ နေပါတော့လေ။ ကျွန်မဆက်လှဲနေချင်သေးသည်။
「မြ ဒီမှာ နေရတာ မပျော်ဘူးလား။
ကျွန်တော် မြအား စူးစိုက်စွာကြည့်ရင်း မေးမိတော့ မြက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးရယ်ကာ ခေါင်းရမ်းပြခဲ့၏။
အို.. အဲလို အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုရဲ့။」
မြ ဘာလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောခဲ့တာပါလိမ့်နော်။ အနည်းဆုံးတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူပျော်တယ် မပျော်ဘူးဆိုတာလောက်တော့ ပြောပြခွင့်၊ ပြောပြရဲတဲ့သတ္တိရှိရမှာပေါ့။ သတ္တိ။ တကယ်တော့ သူလည်း အသုံးချခံ စကားလုံးတစ်ခုသာ။
「ကျွန်တော်တို့သည် မိမိတို့ဘဝမှ မည်သည့်ဂဏန်းတစ်လုံးကိုသော်မျှ နှုတ်ယူခွင့် မရှိနိုင်ပါ။」
မရှိနိုင်တာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ တခုခုကို ဘဝထဲက ဆွဲထုတ်ပါဆိုရင်တောင် ဘာကိုဆွဲထုတ်ရမယ်မှန်း ကျွန်မဆို ကောင်းကောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပဲ။ ဖျက်ထုတ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲ မရှိတာလား။ များလွန်းလို့ ဘယ်ဟာကို ဖျက်ထုတ်ပစ်ရမလဲဆိုတာ မရွေးနိုင်တော့တာလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသေချာ။
「ရေစိုရွှဲနေသော မြ၏အလောင်းကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသောအခါ ကျွန်တော်သည် သောကနှင့် နာကျင်ကြေကွဲမှု၊ ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်မှုတို့ဖြင့် သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါသည်။ 」
ကိုယ့်ဘေးက ကိုယ်ချစ်သောသူ သေဆုံးသွားသောအခါ ကျွန်မရော ဘယ်လိုများ ဖြစ်မှာပါလိမ့်။ စမ်းသပ်ချင်၊ မြည်းစမ်းကြည့်ချင်စိတ်တော့ လုံးလုံးမရှိပါ။ လောကမှာ မစမ်းသပ်ကောင်းသောအရာများ၊ မသိဘဲနေရတာက ပိုကောင်းတဲ့အရာများ တော်တော်များများရှိတယ်လို့ ကျွန်မယုံထားလိုက်ပြီးသားဖြစ်တာကိုး။
「လသည် ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသော ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။」
ကျွန်မအတွက်တော့ လူသားများသည် စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးသော၊ အလွန်ခက်ခဲသော ပုစ္ဆာများဖြစ်သည်။
「နာရီသံတွေ ဆူညံလို့နေ.. ရင်ခုန်သံတွေ မြန်တယ်အချစ်ရေ.. 」
ကဲ.. အိမ်မက်နှင့် အပြင်လောက သဲကွဲမနေသေးသော ကျွန်မဦးနှောက်ကို နှိုးမှဖြစ်ပေတော့မည်။ နေ့စဉ်ပုံမှန်အချိန်ဇယားမှ ထွက်ပြေးခွင့်ရှိသော နေ့ရက်တချို့။ ဆိုသော်လည်း ပြန်ဝင်ရမည်လေ။
အခွင့်ရှိသည်ဆိုတိုင်း ပရမ်းပတာသုံးပစ်တတ်သော ကျွန်မကို နာရီတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတာပဲ ကောင်းပါမည်။ လွတ်မြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်မယ့်အတူတူ ကျွန်မ နာရီတွေနဲ့အတူ ကျေကျေနပ်နပ် အသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲ ရွေးရပါမည်။
September 19, 2015 by hololodilolo	Article	Leaveacomment
အချစ်ဆိုတာ.. စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေးထားပြီးမှ မလိုတော့လို့ commentပိတ်ချလိုက်ရတဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. တကြောင်းတည်းနဲ့ပြီးမယ့်function ရှိတာ နားမလည်ဘဲ loopingမျိုးစုံပတ်ပြီး ရေးနေမိတဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. ပြန်ထွက်မယ့် conditionမေ့ကျန်နေလို့ endless loopဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. exceptionတွေ မတရားဖမ်းထားမိလို့ လိုရင်းကို handleမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. private, public, protected စသဖြင့် သဲသဲကွဲကွဲ မသိဘဲ ဇဝေဇဝါ declaration လုပ်ခဲ့တဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. မလိုအပ်ဘဲ parameterတွေ ပွထနေအောင် လှမ်းပို့မိတဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. performanceကောင်းအောင် ပြင်ရင်း ပြင်ရင်း Editထပ်လိုပြီဆို ဘယ်နားထိရမှန်း နားမလည်တော့တဲ့အရာ။
အချစ်ဆိုတာ.. ဖြုတ်လိုက်တပ်လိုက် requirements တွေကြား ဖာရာထေးရာ အထပ်ထပ်နဲ့ အထိမခံတော့တဲ့အရာ။
July 1, 2015 by hololodilolo	idea, poem	1 Comment
အချစ်ဆိုတာ… မိုးသည်းထဲမှာ သူ့ဘက်တိုးလို့ ထီးမိုးပေးတာ။
အချစ်ဆိုတာ… ပြေနေတဲ့ သူ့ဖိနပ်ကြိုးလေး ကိုယ်ချည်ပေးတာ။
အချစ်ဆိုတာ… ပေမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ဘောင်းဘီအနားလေး သူခေါက်ပေးတာ။
အချစ်ဆိုတာ… ဘေးနားထိုင်ရင်း ကိုယ့်ပုခုံးပေါ် သူလာမှီတာ။
အချစ်ဆိုတာ… ရေစိုနေတဲ့ ဆံပင်ကို တဘက်နဲ့ သုတ်ပေးတာ။
အချစ်ဆိုတာ… သူစားဖို့ မနက်စာလေး ဝယ်သွားတာ။
အချစ်ဆိုတာ… fruit ninja ကို နဖူးတောက်ကြေး ကစားရတာ။
အချစ်ဆိုတာ… ဘယ်နှစ်စီးမြောက်မှာ ကိုယ်တို့စီးမယ့်busကား လာမလဲ လောင်းရတာ။
အချစ်ဆိုတာ… မျက်နှာမြင်ရုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက ပြုံးလာတာ။
အချစ်ဆိုတာ… သူ့နာမည်ဖွဖွရွတ်ရုံနဲ့ မျက်ရည်ဝဲလာတာ။
ဒီလိုပါပဲ…. ကျွန်မသိတဲ့ အချစ်ဆိုတာ ချစ်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ ထပ်မပြောဖြစ်တော့တာ။
July 1, 2015 by hololodilolo	poem	Leaveacomment